Ropa rekumanikidza kuongorora
10L imwechete yakayerera inoyerera okisijeni concentrator mudura izvozvi
10L imwechete yakayerera inoyerera okisijeni concentrator mudura izvozvi Mazuva ano, kushaikwa kwe10L okisijeni concentrator kwakawedzera zvakanyanya. Uchishandisa iyo adsorption mashandiro emolecular sieve, kuburikidza nesimba remuviri, iine hombe yekusiya mafuta-yemahara compressor sesimba, iyo nitrogen mumhepo ...Verenga zvimwe »
10L oxygen concentrators vane stock ikozvino.
10L oxygen concentrators vane stock ikozvino. Iye zvino mazuva nzvimbo zhinji kushayikwa kweokisijeni concentrators uye yakawanda uye yakawanda mirairo inotendeukira kune chinese fekitori. Sezvo vatengi vachiwedzera kudirana kuChina, iyo nguva yekuendesa yeChinese oxygen jenareta iri kuramba ichireba uye yakareba. Zvino kukurukura nguva okisijeni ge ...Verenga zvimwe »
Mushure mekunge oxygen concentrator yaputika muGangapur, Rajasthan, mukadzi akaurayiwa uye murume wake aive ari pakaoma
Zvinoitika kuti kushandiswa kweakakundikana okisijeni concentrator nevaviri muGangapur Guta, Rajasthan kwaive kuuraya nekuti chishandiso chakaputika payakavhurwa. Mudzimai akafa uye murume akakuvara zvakaipisisa mutsaona iyi. Chiitiko ichi chakaitika mudunhu reUdaimol reGangapur. A ...Verenga zvimwe »
Ndeupi musiyano uripo pakati peKN95 neKN90 mask?
1. Makirasi akasiyana. Mask KN90 ine yakaderera isina-oiri masisitiri ekudzivirira mwero kupfuura KN95. 2. Yakasiyana filtration kushanda. Iyo maski KN90 inogona kusefa zvinopfuura makumi mapfumbamwe kubva muzana ezve chinhu chinhu; Iyo KN95 maski inogona kusefa inopfuura 95 muzana yezvinhu zvine chinhu. 3. Mhepo dzakasiyana inopinda. Mor ...Verenga zvimwe »
Mamwe matipi ezvekurapa uye zvechivanhu masks ekumeso
Mamwe matipi ezvekurapa uye zvechivanhu masks ekumeso 1. Ko masiki anogona kushambidzwa uye kushandiswazve? Haikwanise! Masiki kazhinji haana-kuruka jira + firita rukoko + isina-yakarukwa machira chimiro. Iyo firita fiber pakati inofanirwa kuchengetwa yakaoma kuomerera pane iyo electrostatic adsorption kugona kweiyo kusefa, saka mishonga ...Verenga zvimwe »
Sei masiki achidzivirira kupararira kwehutachiona?
Post nguva: Jul-02-2021
Sei masiki achidzivirira kupararira kwehutachiona? Rudzii rwezvinhu zvacho? Tinowanzo taura kuti masiki anogadzirwa nemachira asina kurukwa. Machira asina kurukwa machira asina kurukwa, zvinopesana nemicheka yakarukwa, iyo inogadzirwa neshinda dzakatarisana kana dzakasarudzika. Kana zvasvika kumasikisi, ...Verenga zvimwe »
Global Vibrating Net Atomizer Musika muna 2021: SWOT Kuongorora kweakakomba madhiraivha eCAGR Kukosha Kukura | Pamusoro Brands: Philips Hutano, Omron Hutano, GF Hutano Zvigadzirwa…
Post nguva: Jun-28-2021
Rondedzero yazvino yekutsvagisa pamusika wepasi rose unodedera mesh atomizer unopa kutsvagisa kwekuwedzera pane iyo COVID-19 kupaza kupa ruzivo rwechizvino-zvino pamusoro pehunhu hukuru hweanotetemesa mesh atomizer musika. Chirevo chehungwaru chine kuferefetwa kunoenderana nezano razvino ...Verenga zvimwe »
Kwete Border, Inc. Inozivisa Inobudirira Kuvhurwa kweMediDent
ORIENTMED, AZ, Kukadzi. Kukadzi 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - kuburikidza neNewMediaWire - No Borders, Inc. inotsigira nyika yeAmerica vaccinati ...Verenga zvimwe »
ORIENTMED inogona kupa pfupi kuendesa pane 1ml sirinji
ORIENTMED yakawedzera yayo 1ml sirinji yekugadzira mutsara. Simba rekugadzira rakawedzera zvakapetwa kaviri. Kunyangwe chirongwa chekugadzira chiri chakazara. Nekudaro, ORIENTMED inovimbisa kuti kana mutengi aisa odha, inozopa pekutanga kumutengi kuendesa miriyoni imwe inoraswa syr ...Verenga zvimwe »
ORIENTMED yakapedza yayo 1ml luer lock sirinji yekugadzira mutsara
Post nguva: Apr-08-2021
Mumwe waKurume 1, ORIENTMED yakapedzisa yayo 1ml luer lock sirinji yekugadzira mutsara. Nekuvandudzwa kwechangobva kuitika kwedenda repasirese, kudiwa kwemajekiseni kuri kuwedzera. Kune kudiwa kuri kukura kwemajekiseni, kunyanya 1ml majekiseni. Mukupindura kukura kwekupenga mukuda kwemajekiseni, ORIENTMED ...Verenga zvimwe »
Nhanganyaya yekushandisa kwakangwara kweinorasirwa 1mL chena sirinji
Post nguva: Kukadzi-19-2021
Nhanganyaya yekushandisa kwakangwara kweinorasirwa 1mL Auto-inoparadza Syringe (anorectal matenda) Nekuvandudzwa kwesainzi yezvokurapa, sirinji isina kuraswa inoshandiswa zvakanyanya mukiriniki. Iyo inogona kuraswa 1mL chena sirinji haina kungoshandiswa chete zvakajairika (kuyera kweganda uye inoculation yekudzivirira), asi ...Verenga zvimwe »
Ndeipi nheyo yenano spra pfuti?
Ndeipi nheyo yenano spra pfuti? Tsananguro yeatomization tekinoroji ndeye kutora DU uye kushandisa ultrasonic transducer, inonziwo chitete, kana dunhu richifambisa wafer, iyo wafer inodedera, mvura iri pamusoro peiyo vibration kuita zvidiki zvidiki, hupamhi hwayo hunosvika ...Verenga zvimwe »
10L imwechete yakakwira kuyerera okisijeni concentrator ...
10L imwechete yakayerera inoyerera okisijeni concentrator mudura izvozvi Mazuva ano, kushaikwa kwe10L okisijeni concentrator kwakawedzera zvakanyanya. Uchishandisa iyo adsorption mashandiro emolecular sieve, kuburikidza nesimba remuviri, iine hombe yekumisikidza oiri-isina compressor sesimba, iyo nitrogen mumhepo uye neoksijeni kupatsanurwa, uye pakupedzisira kuwana yakanyanya yevasungwa yemweya. Rudzi urwu rwe okisijeni jenareta inogadzira okisijeni nekukurumidza, okisijeni yevasungwa yakakwira, inokodzera marudzi ese evanhu oxygen iyo ...
10L oxygen concentrators vane stock ikozvino. Iye zvino mazuva nzvimbo zhinji kushayikwa kweokisijeni concentrators uye yakawanda uye yakawanda mirairo inotendeukira kune chinese fekitori. Sezvo vatengi vachiwedzera kudirana kuChina, iyo nguva yekuendesa yeChinese oxygen jenareta iri kuramba ichireba uye yakareba. Iye zvino nguva yekuendesa ye oxygen jenareta mazuva gumi nemashanu kusvika makumi mashanu. Kambani yedu yakawana kuwedzera mukuburitsa nekuvandudza yekugadzira mutsara. Ikozvino kune angangoita mazana maviri nemakumi manomwe mayuniti arimo mumwedzi wega wega. Ndokumbira utarise kune inotevera informati ...
60mm Petri Dish, Kn95 Inoraswa Chiso Mask, Kubata Pamuviri Kits, Disposable Gloves Nitrile upfu Free, Auto Shoe Kavha Dispenser, Chivharo Cheshangu Chiremba,